Huawei သည်၎င်း၏ OS အတွက်အခြေခံအဖြစ် Sailfish OS ၏ fork ကိုယူနိုင်သည် Androidsis
Huawei သည်၎င်း၏လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုအခြေခံရန် Jolla OS ၏လမ်းဆုံလမ်းခွကိုရယူနိုင်သည်
Huawei ၏လာမည့်စမတ်ဖုန်းလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယရှိနေသေးသည်။ သော်လည်း တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးသည် Android နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုပိတ်ပင်ထားသည်အချို့သောအစီရင်ခံစာများအရ၎င်း၏မျှော်လင့်ထားသော OS သည်ဂူဂဲလ်ကို အခြေခံ၍ ဖြစ်နိုင်သည်၊
နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုကကုမ္ပဏီကိုယူနိုင်သည်ဟုဆိုသည် Sailfish OS ကို ဒီအခြေခံအကျဆုံးကနေလူကြိုက်များတဲ့မိုဘိုင်း operating system ကိုစတင်ခြင်းဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုစတင်ရန် Ark OS ဒါမှမဟုတ် HongMeng OS. ကျနော်တို့ဒီအကြောင်းကိုအကြောင်းပြောဆို။
Huawei တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပစ်ခတ်ခဲ့သည့်အန္တရာယ်အရှိဆုံးမြှားကိုရှောင်ရှားရန်၊ ကုမ္ပဏီ၏ Android နှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုဂယက်ရိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းများအတွက် operating system ၏နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျော် သငျသညျရက်ပေါင်း 90 အဘို့အအတော်လေးပုံမှန်ပုံမှန်ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်အောင်အမေရိကန်ကပေးထားသောအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး.
ရုရှားဗားရှင်း Sailfish OS သည် Huawei ၏အခြေခံ OS အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Jolla ကုမ္ပဏီမှစမတ်ဖုန်းများအတွက်ဖင်လန်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်မှာ၎င်းသည် open source ဖြစ်ပြီး C ++ ဘာသာဖြင့် Linux ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းသည် developer များအတွက်ဖွင့်သည်။
ဒီ Huawei ဖုန်းများမှာ Android Q ရှိနိုင်ကြောင်းယိုစိမ့်မှုအရသိရသည်
အသုံးပြုသူအားခိုင်မာသောသီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်ပေးသော Sailfish OS သည်လူကြိုက်များသည်။ သို့သော်၎င်းတွင်နောက်လိုက်များပါ ၀ င်သော်လည်းသေးသည်။ နောက်ထပ်ဘာလဲOS သည်အချို့သောကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်းကိရိယာများတွင်မရှိသလောက်နည်းပါးသော်လည်း Android နှင့် iOS တို့နှင့်ယှဉ်။ မရပါ, segment ထဲမှာယှဉ်ပြိုင်မှုမရှိခြင်းနှင့်မယှဉ်နိုင်တဲ့ပုံရသည်သောမိုဘိုင်း operating system နှစ်ခု။ ဒါကြောင့် Huawei ကဘယ်လိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဒီနှစ်ခုကိုယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက်အများကြီးကြိုးစားရလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Huawei သည်၎င်း၏လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုအခြေခံရန် Jolla OS ၏လမ်းဆုံလမ်းခွကိုရယူနိုင်သည်
Vivo Z1 Pro ၏တရားဝင်ပိုစတာများသည်၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်။ Snapdragon 712 သည်ထင်ရှားသည်